Ugu weyn - Isku xirka Daryeelka WA- Ku Xidhnow - Caafimaad qabo
Ku xidh dadka dhabta ah
Baro sida tignoolajiyadu u taageeri karto caafimaadkaaga.
Ku Xidhnow, Caafimaad Qab
Hoos u deg si aad u hesho talooyin ku saabsan maaraynta daryeelkaaga caafimaadka onlayn ama telefoon ahaan. Ku soo noqo boggan wakhti kasta oo aad u baahato!
Call 866-757-1832 (TTY: 711) inaad qof dhab ah la hadasho. Tababar hal-ka-hal ah ayaa diyaar ah
Isniin - Jimce, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo
Maxay Link to Care WA kuu qaban kartaa?
Bixi teleefan qiimo jaban, oo ku dhex lugee barashada isticmaalka
Ku xidhid internet jaban
Waxay kaa caawinaysaa inaad ku kalsoonaato isticmaalka ilaha khadka si aad u ahaato mid caafimaad leh
Ku dejiso inaad ku booqato dhakhtarkaaga taleefoon ama wicitaan muuqaal ah
Taleefanka casriga ah waxa ay ku siinayaa ikhtiyaar aad kula xidhiidho bixiyayaasha cod ama muuqaal, iyo qaar kaloo badan.
Sideen ku helaa telefoon?
Dad badan ayaa u qalma telefoon qiimo jaban. Barnaamij federaal ah oo la yiraahdo Lifeline waxay siisaa telefoono, xog, iyo daqiiqado qoysaska u qalma.
➜ Codso Khadka Nolosha
Durba ma leedahay Lifeline? Waxaad iska qori kartaa adeega intarneedka la dhimay.
Taleefankaygu ma yahay mid caqli badan?
Waxaan ugu yeernaa taleefannada "smart" iyadoo ku saleysan waxay sameyn karaan. Halkan waxaa ah siyaabo aad ku kala sooci karto noocyada kala duwan ee telefoonada.
Casriga casriga ah:
Shaashad weyn oo ka falcelisa taabashada
In yar (ama maya) badhamada
Wicitaanada codka iyo muqaalka, fariimaha qoraalka ah
Waxa uu ka baadho karaa intarneedka oo uu maamuli karaa barnaamujyada (apps) sida kombiyuuterku awoodo
Wicitaanada codka iyo fariimaha qoraalka ah
Waxa laga yaabaa inay lahaadaan barnaamijyo (apps) oo aan isticmaalin intarneedka, sida ciyaaraha iyo liiska xidhiidhka
Ku fadhiista saldhig
Wuxuu u baahan yahay in lagu xidho
Wicitaanada codka kaliya
Waxaad isticmaali kartaa intarneedka si aad u sameyso waxyaabo ay ka mid yihiin buuxinta warqadaha daawada ama inaad la hadasho takhtarkaaga fiidyow.
Waxaan u baahanahay marin internet oo la isku halayn karo.
Barnaamijyada cusub ee federaalka ayaa laga yaabaa inay kaa caawiyaan inaad qiimo dhimis ku hesho adeegaaga intarneedka.
Ka hel taageero shaqaalaha khadka telefoonka ee jooga 866-757-1832 (TTY:711) Isniin - Jimco, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo
Taabo si aad u wacdo
Booqo Isku xidhka la awoodi karo Website-ka barnaamijka si aad u raadiso oo aad u dalbato qiimo dhimis kuu dhow
Waxaad si toos ah ugala wareegi kartaa daryeelkaaga caafimaadka taleefankaaga.
Sideen u maarayn karaa daryeelkayga khadka?
Inta badan rugaha caafimaadku waxay leeyihiin shabakad ammaan ah (portals bukaan) halkaas oo aad ka arki karto macluumaadka caafimaadkaaga oo aad samayn karto sida:
Buuxi warqadaha daawada
Fariin u dir kooxdaada daryeelka
Dhakhaatiir badan ayaa sidoo kale balamo ku bixiya telefoon ama muuqaal. Booqashooyinkan waxa kale oo lagu magacaabi karaa "virtual" ama "telehealth."
Daryeelka noocaan ah kuma habboona xaaladaha degdegga ah, laakiin waxaa badanaa loo isticmaalaa mowduucyo ay ka mid yihiin:
Hargab ama calool xanuun
Waydii rugtaada haddii ballan taleefoon ama muuqaal ku habboon tahay baahiyahaaga caafimaad.
Si aad u bilowdo, waxaad u baahan doontaa:
Mareegta ay bixiso rugtaada caafimaadka
U diyaargarowga taleefankaaga ama ballanta fiidyaha
Raac liiskan hubinta si aad u hubiso in booqashada dhakhtarkaaga casriga ah (telehealth) ay tahay mid sahlan oo aan walwal lahayn.
Taleefanka, tablet-ka, ama kombayutarka leh makarafoon (iyo kamarad loogu talagalay wicitaannada fiidiyowga) Ha iloobin inaad dalacdo ama ku xidhid.
Adeegga internetka ama telefoonka. Waxaad u baahan doontaa xidhiidh la isku halayn karo
Meel deggan oo gaar ah. Ama meel aad ku qanacsan tahay inaad kala hadasho caafimaadkaaga.
Qalin iyo warqad. Wixii qoraal ah!
Helitaanka nidaamka aaminka ah ee rugtaada. Tani waxay noqon kartaa wicitaan telefoon, app aad horey u isticmaashay si aad ula hadasho asxaabta iyo qoyska, ama abka cusub. Faahfaahinta weydii rugtaada.
Oo waa kan waxa laga filayo maalinta booqashadaada:
Soo gal ama saxiix dhowr daqiiqo ka hor. La xidhiidh rugtaada haddii ay dhibaato kaa haysato.
Waxaad la hadli doontaa bixiye Sida booqasho qof ahaaneed. Waxay ku siin doonaan talooyinkooda waxayna ku ogeysiin doonaan waxaad samayn lahayd marka xigta.
Dhibaatooyin farsamo ayaa dhici kara — waa caadi. U sheeg adeeg bixiyahaaga haddii aadan arki karin ama aadan maqli karin.
Print Taabo si aad u wacdo
Wax kale raadinaya? Guji hel kheyraadka hoose si aad u hesho agab dheeri ah oo lagu taliyay oo ku saabsan daryeelka farsamada, helida ciwaanka iimaylka, iyo in ka badan.
➜ Hel Khayraadka
Isku xirka Care WA waxaa ku shaqeeya Shabakadda Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHNW) – oo ay ku xiran yihiin 21 xarumood oo caafimaadka bulshada ah oo ku baahsan Washington oo ka shaqeeya in ka badan 140 rugaha caafimaadka. Hadafka CHNW waa in la helo dad badan oo ku xiran daryeelka caafimaadka iyadoo la siinayo agabka iyo taageerada ay u baahan yihiin si ay u helaan oo ay u maamulaan daryeelka khadka iyo taleefanka.
Ma u baahan tahay qorshe caafimaad ma-ama qiimo jaban? Taasna waan ku caawin karnaa!
CHNW sidoo kale waxay leedahay Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington, qorshe caafimaad oo siiya caymiska caafimaadka qofka iyo qoyska oo la awoodi karo dadka Gobolka Washington.
Na soo wac si aan u aragno haddii aad u qalanto caymiska caafimaadka bilaashka ah: 1-866-907-1904 (TTY:711), Isniin-Jimce, 8 subaxnimo - 5 galabnimo
Iyada oo maalgelinta deeqda ka
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Febraayo 16, 2022
Isku xirka Care WA waxaa ku shaqeeya Shabakadda Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHNW) - oo ay ku xiran yihiin 21 xarumood oo caafimaadka bulshada ah oo ka shaqeeya in ka badan 140 rugaha caafimaadka Washington. Hadafka CHNW waa in la helo dad badan oo ku xiran daryeelka caafimaadka iyadoo la siinayo agabka iyo taageerada ay u baahan yihiin si ay u helaan oo ay u maamulaan daryeelka khadka iyo taleefanka.
Xuquuqda daabacaadda 2022 - Isku xidhka Daryeelka WA & Shabakadda Caafimaadka Bulshada ee Washington